June 28, 2020 – Xorriya Online
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa looga hadlay hadal-jeedintii baarlamaanka ee Gudoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka, hadalkaas oo ay Madashu ku sheegtay mid xanbaarsanaa muddo kordhin loo sameeyo hogaanka dalka. Madasha ayaa ku eedeysay GMDQ in uu ku fashilmay in dalka laga qabto doorasho ku dhacda waqtigii loogu talogalay, sidaas darteedna ay […]
Wasiir Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa oo lagu eedeeyey ineey qalqal galin iyo dhibaato ka wadaan magaalada Mandheera
Saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ayaa ciidamada wasiirka amniga maamulka Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdiuur (Janan) ku eedeeyey inay qal-qal amni ka wadaan gudaha magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. Xildhibaan Cumar Maxamed Macalin oo laga soo doorto magaaladaasi ayaa sheegay in ciidamada Janan ay hub ka iibinayaan qabaa’illada ku nool […]
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa war kasoo saaray hadalkii ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) oo ay ku shaacisay nooca doorasho ee Dalka ka dhaceysa. Qoraalka ka soo baxay Qaramada Midoobay ayaa waxaa loogu mahadceliyay guddoomiye Xaliimo Yarey oo soo bandhigtay noocyada farsmo ee lagu […]
Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub ayaa taageeray hababkii doorasho ee ay shalay soo bandhigtay Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey), iyadoo ka hor-hadleysay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka. Qoraal la soo dhigay barta Twitterka ee Xafiiska Qaramada Midoobey ee UNSOM ayaa lagu soo dhoweeyay hababkaas, si loo gaaro doorashada […]
Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah, gaar ahaan doorashada 2020/21 iyo sidoo kale matalaadda gobolka Banaadir. Xasan Sheekh ayaa si aad ah u dhaliilay warbixinta guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka, wuxuuna shaaciyey in laga damacsan […]
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo maanta ka hadlayay banaan bax lagu taageerayay ansixintii Baarlamaanka ee matalaada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare ayaa soo dhoweeyay sida ay Baarlamaanka uga jawaabeen in Gobolka Banaadir uu helo matalaad u qalanta. Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in Caasimadda Muqdisho ay marti gelisay […]
Banaanbax lagu taageerayo ansixintii Mataalada Gobolka Banaadir oo ka socda Muqdisho
Waxaa saaka magaalada Muqdisho ka socda banaanbax lagu taageerayo go’aankii shalay Xildhibaannada Golaha Shacabka ku ansixiyeen matalaada Gobolka Banaadir ee Aqalka sare. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa soo qaban qaabiyay banaan baxan, waxaana dadweyne u badan haween oo laga soo saaray degmooyinka uu isugu keenay Fagaaraha Taalada Daljirka Dahsoon. Banaan baxayaasha ayaa wata boorar ay ku […]
War murtiyeed laga soo saaray shirkii madaxda Puntland iyo Galmudug
Shirka Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug Saciid C/llaahi Deni iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo magaalada Gaalkacyo uga socday ayaa soo gabagaboobay, iyadoo laga soo saaray war murtiyeed ka kooban 7 qodob. Shirkan oo socday 26-27 bishan June ayaa Madaxda labada dowlad goboleed wafuud ay kala hoggaaminayeen kulamo ku yeeshay Madaxtooyada Puntland ee Waqooyiga Gaalkacyo. “Labada […]
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa ka hadlay ansixinta xeerka Matalaada Gobolka Banaadir ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Duqa Muqdisho Cumar Finish ayuu ugu Mahadceliyay Baarlamaanka JFS oo maanta si aqlabiyad leh u ansixiyay xeerkii Matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare, isagoo sheegay inay kaalin […]